नेपालीलाई कतिञ्जेल भेडाबाख्राझै बेचिरहने सरकार ? « Name of Truth News : News Portal in Nepal
नेपालीलाई कतिञ्जेल भेडाबाख्राझै बेचिरहने सरकार ?
प्रकाशित मिति : २०७९, बैशाख, २७, मंगलवार १७:४६
अहिले मुलुक नै चुनावमय भएको छ । गाँउठाँउ सबैतिरको वातावरण चुनावले तताएको छ । तर, मुलुकमा यस्ता धेरै नागरिक छन् जसलाई चुनावले केही फरक परेको छैन् । उनीहरु चुनावकै बेला भएपनि पेट पाल्नको लागि खाडी पस्दै छ । श्रम विभागका अनुसार दैनिक ५३ हजारभन्दा बढीले विदेश जानको निम्ति श्रम स्वीकृति लिएका छन् । देशमा निर्वाचन हुदैछ तर नेपालीलाई आफ्नै पेट पाल्नको चिन्ता छ । एक करोडभन्दा बढी नेपालीहरु बाहिरी मुलुकमा छन् । तिनीहरुले भोट हाल्न पाउदैनन् ।
शीर्ष नेता भनिएका पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवाबाट जनताहरु आजित भइसकेका छन् । आफु पनि काम गर्दैनन्, अन्यका लागि पनि बाटो खुल्ला गर्दैनन् । पार्टीकै अध्यक्ष यी चोर नेताहरु भएपछि देशको रुप फेरिएला ? गरिबी र बेरोजगारी यिनीहरुले हटाउलान् भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । नेपालमै बसेर केही गर्छु । यही स्वरोजगार बन्छु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । व्यापार व्यवसाय गर्छुभन्दा पनि नसक्ने स्थिति बनेको छ ।
गाँउदेखि सहरसम्म एउटै टे्रन्ड चलेको छः नागरिकता बनाउनेबित्तिकै विदेश जाने । नेपालमा जागिर पाइदैन् भन्ने छाप सबैमा परिसकेको छ । रोजगारीको अभावमा पढेलेखेका समेत बाहिर गइरहेका छन् । हुनेखाने राम्रो मुलुक पसिहाल्छन्, हुँदाखाने खाडी । अमेरिका, अस्टे्रलियालगायत अन्य युरोपेली मुलुक छिरेकाहरु नेपाल फकिदैनन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीले विकृति ल्याएको पाइन्छ । श्रीमान् काम गर्न भनेर खाडी मुलुक जाने श्रीमती परपुरुषसंग लागिदिने । खाडी मुलुकमा गएर कमाएको पैसा सबै श्रीमतीले लिएर अर्कैसंग भागेको घटनाहरु थुप्रै छन् ।
आर्थिक कमजोर, नपढेका, सीधासाधी मानिसहरु खाडी मुलुक जान्छन् । मँहगो व्याजमा ऋण लिएर उनीहरुले म्यानपावरमा बुझाउछन् । तर, म्यानपावरले उनीहरुलाई आजभोलि भन्दै अड्काएर राखिदिन्छ । एक महिनामा भिसा लाग्छ भनेपनि कतिपयको ६ महिनासम्म पनि भिसा लाग्दैन् । भिसा लागेर उडीहालेपनि उता गएर एकदमै कष्टकर काममा पर्छन् । म्यानपावर कम्पनीहरुले सिधासाधीहरुलाई ठग्ने, झुल्याउने र दुःख दिने काम गरिरहेका छन् । तर, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र श्रम विभागका महानिर्देशकहरुले मौन बसेका छन् । त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरुबाटै लुप्त भएर मोटाएर बसिरहेका छन् । काम नै नगर्ने तर कमिशन खानेचाहि तम्सिनेमा हाम्रो देशको तीनजना मन्त्री पर्छन् ।
श्रममन्त्री श्रेष्ठ, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र भुमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठ कामचोर मन्त्री हुन् । काम नै नगर्ने र जतिबेला पनि पत्रकार सम्मेलन गर्ने । भ्रष्ट्राचार गरेर पार्टीलाई पोसेको कारण पार्टीले यिनीहरुलाई नहटाएको स्पष्ट बुझिन्छ । यी तिनै जना नेपालकै हालसम्मको असक्षममन्त्रीमा गनिन्छन् । यता, कन्सल्टेन्सीहरुमा पनि ठगीधन्दा मौलाउदो छ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले बाहिर पठाउने नाममा पैसा लिएको र नपठाएको अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपाली विद्यार्थीको भ्रम चिर्न नसक्दा शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको ओइरो लागेको छ । उनको कमीकमजोरीको कारण नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिने